Isku-darka Emulsifying, Mashiinka Buuxinta, Tanka Isku-Darka - Maxwell
In ka badan 10 sano oo waayo-aragnimo ah
Macquul ah, xasilloon oo sax ah
Waqti ku habboon oo wax ku ool ah iibka ka dib
Waxaan soo bandhignay wax soo saarka ugu fiican ee wax soo saarka
Wuxi Maxwell Automation Technology Co., Ltd waxaa lagu maalgeliyey Hal milyan oo Doollar. Waxaan ku suganahay aagga warshadaha sare ee farshaxanka. Waxaan inta badan ku hawlan nahay is-qurxinta, daawada, cuntada, warshadaha kiimikada, iyo isku-darka horumarka, soosaarka iyo iibinta wadajirka ah.
Waxbadan Baro +
SOO SAARIDDA MACMIILKA
Waa mashiin fudud oo sahlan, oo ku habboon oo qiimo jaban ku buuxiya.
BUUXIN-AUTO PLASTIC TUBE FUUX IYO MACHALAD SALSAN
Waxaan falanqeynaa furitaanka, haynta tubbada iyo habka buuxinta mashiinka tuubada iyo xirmooyinka jira.
QIIMO BILAASH OO DHAN
Ugu badnaan ku hawlan ku-darkayaasha la taaban karo, xarunta isku-dhafka ah ee la taaban karo, iyo matoorka la taaban karo iyo mashiinnada kale ee dhismaha.
rukumo joornaalka warside